Madxweynaha Puntland oo kismaayo u duulay – Radio Daljir
Madxweynaha Puntland oo kismaayo u duulay
Oktoobar 10, 2019 7:10 b 0
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa goor dhawayd ka ambabaxay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
wafdiga madaxweynaha ayaa ka qayb galaya Caleema saarka madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe.
magaalada Kismaayo waxaa ka socota xaflada qaban qaabada lagu soo dhawaynayo wafdiga madaxweynaha Puntland, waxaana gaaroonka Kismaayo kusugan madaxweynaha Jubaland, Wasiiro, Xildhibaano, iyo dadweyne farabadan.
dowladda Soomaaliya ayaa ku guul daraysatay in madaxweyne Deni iyo wafdigiisa ay ka baajiso ka qayb galka caleema saarka madaxweynaha Jubaland kadib markii madaxtooyada Bosaaso uu kula kulmay wafdi wasiiro ah oo dowladda ka socday.
Madaxweynaha ayaa lafilayay in uu shalay u ambabaxo magaalada Kismaayo balse wax uu ubaaqday kulamadii uu Bosaaso kula lahaa wasiiradii dowladda ka socday.
Guddoomiyaha Bandar-bayla“ Waxaan ka hor tagaynaa xaalufka Badda ”(dhegayso)
Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti oo kulan ku yeeshay Muqdisho (dhegayso)